ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ မြန်မာနှစ်ဦး သဝဏ်လွှာ ~ pyidawoo
7:26 AM Pyidawoo No comments
... ၁၃၇၃ခု နှစ်သစ်ကူး နှစ်ဦး နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ.
၁၃၇၂-ခုနှစ်ကုန်ဆုံး၍ ၁၃၇၃-ခု နှစ်သစ်ဆီသို. ကူးပြောင်းဝင်ရောက်ပါပြီ။ ယနေ.ကမ္ဘာနှင့် မြန်မာမှာ ကြုံနေရသည့် ဘေးအမျုိးမျိုး ရန်အမျိုးမျိုး မကောင်းတာမှန်သမျှ နှစ်ဟောင်းမှာ ချန်ထားလို.ရရင် ချန်ထားခဲ့ပြီး နှစ်သစ်ကို ကူးချင်မိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒသည် ဆုတောင်းလျှင်ရမည် ဟူသော ဝါဒမဟုတ် အကြောင်းတရားကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းယူ လုပ်ယူရသော ဝါဒဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် မလုပ်ဘဲနှင့် ဖြစ်ချင်နေလို. ရမည်မဟုတ်မှန်းလည်း သိနေပါသည်။
...ဘုရားဝါဒက အကြောင်းအကျိူးကို ဆက်စပ်သိမြင်သော ဝါဒဖြစ်သည်။ တို.ကြောင့် အကြောင်း ကင်းသော အကျုိးမရှိ။ ယခုမျက်မှောက် ကမ္ဘာနှင့် မြန်မာမှာ ယခုလို အဖြစ်မျုိးတွေနှင့် ကြုံဆုံနေကြရသည်မှာလည်း အကြောင်းရှိပါသည်။ ထို အကြောင်းကို ပြုခဲ့ကြသဖြင့် အကျိုးဆက် ကို ရနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဟောင်းမှာ မကောင်းတာတွေ ထားခဲ့ချင်လို. ဆုတောင်း နေလည်း အပိုပါ။ ရမည်မဟုတ်ပါ။ အနာဂါတ်နှစ်သစ်တွေမှာ မကောင်းတာ ဆက်မဖြစ်အောင် ဒီနှစ်သစ်မှာ မကောင်းတာတွေနဲ. အဆက်ဖြတ်ပြီး ကောင်းတာတွေ အဆက်မပြတ် လုပ်မှ အကြောင်းမှန်လို. အကျုိးပေးကောင်းမှာ ဧကန်ပါ။
ဆူလိုက်တဲ့ အိမ်လို.ပြောကြပေမယ့် အိမ်က မဆူတတ်ပါ။ အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေ ဆူတာပါ။ ခေတ်မကောင်းဘူးဆိုကြပေမယ့် ခေတ်ဆိုတာ လူက လုပ်တာပါ။ ဒါကြောင့် ခေတ်မကောင်းဘူး ဆိုရင် သေချာပြီ။ လူတွေ မကောင်းကြတော့ဘူး။ မကောင်းရင် ဒီတိုင်းနေလို. မဖြစ်ပါ။ ကောင်းအောင် ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပြင်မှ လူပီသပြီး လူဖြစ်ရကျုိးနပ်ပါမည်။
နေသာသလို မနေကြစေချင်ပါ။ နေသာသလို နေခဲ့ကြလို. နိူ်င်ငံတကာမှာ တို.နိူင်ငံ တို.လူမျုိး လူတန်းမစေ့ လူရာမဝင် လူတောမတိုး ကလေကချေလိုမျုိး ဖြစ်နေရတာပါ။ လေဆိပ်အဝင် ပတ်စပို. မြင်ကတည်းက သူတို.မျက်နှာအချိူး အောက်သိုးသိုးနဲ.ဆိုတာ ကြားရဖန်များလို. ရိုးမသွားပါနဲ.။ စိတ်ထဲမှာယူထား ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံလို ပွားပြီး ကျုိးစားဖို. တွန်းအားအနေနဲ. မှတ်မှတ်သားသား ရှိသင့်ပါတယ်။ လောကမှာ အမှတ်မထားသူလည်းတစ်ယောက် မပြတ်သားသူ လည်း တစ်ယောက် အမြဲ ဒုက္ခရောက်နေတတ်ပါတယ်။ တို.နိူင်ငံ တို.လူမျုိးလည်း ကျွန်ဖြစ်ရတာ ကအစ လွတ်လပ်ရေးခေတ်အလယ် ဒီမိုကရေစီနဲ. လူ.အခွင့်အရေး တောင်းဆိုမှုအဆုံး ဘယ်တုန်း ကမှ မှတ်မှတ်သားသား ပြတ်ပြတ်သားသားမရှိဘဲ မရှင်းမရှင်းနဲ. အခုအချိန်အထိ နိူင်ငံ့အနာဂါတ် မိုးသောက်နံနက် အာရုဏ်မတက်ဘဲ မှောင်မှောင်မည်းမည်း ညဉ့်နက်ဆဲပါ။
လက်ညှိုးထိုး အပြစ်တင်တာကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ ပြေလည်သွားမှာ မဟုတ်ပါ။ ပိုရှုပ်လာဖို.ပဲရှိပါတယ်။ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တစ်ကိုယ်ကောင်းအတွေးနဲ. နေသာသလိုလေး မနေကြဘဲ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထား အများအတွက် နည်းနည်းလေး အပင်ပန်းခံပြီး တစ်နိူင်တစ်ပိုင် လုပ်သင့်တာကို လုပ်နိူင်သမျှ အားလုံးသာ လုပ်သွားကြမယ်ဆိုရင် ဒီခေတ်ကြီး မပြောင်းစရာ မကောင်းစရာ အကြောင်း လုံးဝ မရှိပါ။
၁၃၃၇- နှစ်ဦး နှစ်သစ်ကူးပါပြီ ရွှေမြန်မာတို.။ တို. နိူင်ငံ တို.လူမျုိးလည်း တစ်ဦးချင်းစီဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်ထူးအောင် စိတ်သစ် လူသစ် အတွေးသစ် ခွန်အားသစ်နဲ. နှစ်သစ်ကို ဖြတ်သန်း အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင် ဆွတ်ခူးနိူင်ကြပါစေကြောင်း။ (ပြည်တော်ဦး